रोचक – Page 97 – Etajakhabar
एजेन्सी– भारतकी एक किशोरीको शरीरको सबै छाला सर्पको जस्तै छ। उनका हात–खुट्टा मात्र देख्दा मानिसहरु सर्प भनेर झुकिन्छन्। सर्पको जस्तै उनको छालामा कत्ला पर्ने र झर्ने गर्छ। सलिनी यादव नाम गरेकी १६ वर्षीया ती किशोरीको शरीरबाट एउटा अनौठो गन्ध पनि आउँछ। उक्त गन्ध सर्पको कत्लाबाट आउने गन्धजस्तै भएको बताइएको छ। परिबारको दयनीय आर्थिक अवस्थाका कारण खर्च जुटाउन नसक्दा उनको उपचार समयमै हुन नसकेको हो। किशोरी...
विद्यालयले नै गरिदियो श्रीपञ्चमीका अवसरमा ९९ जनाको सामूहिक ब्रतबन्ध
नुवाकोट, १९ माघ- जिल्लाको एक मात्र संस्कृत विद्यालय सहिद जगतप्रकाशजङ्ग शाह संस्कृत माविले आज श्रीपञ्चमीका अवसरमा ९९ जनाको सामूहिक ब्रतबन्ध गराएको छ । विदुर –७ देवीघाटस्थित नीलकण्ठ धाममा गरिएको सामूहिक व्रतबन्ध थोरै शुल्कमा गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मानबहादुर डङ्गोलले बताउनुभयो । विसं २०५५ मा संस्कृत विद्यालय सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत अभाव भएपछि विद्यालयलाई थोरै भए पनि आर्थिक राह...
यस्ता प्रेमी जसले टाइमपास गर भन्दै आफ्नै प्रेमीकालाई वेश्यालय पठाए
एजेन्सी । एक हट मोडललाई फुर्सदको समयमा के गर्न रुचाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले बेश्यावृति गर्छु भनि दिएको अभिब्यक्तिले यतिबेला विश्वभर विशेष चर्चा पाइरहेको छ । सर्वियाकी रियालिटी २४ बर्षकी टीवी स्टार तथा मोडल सेनाडा नुर्किकले आर्कषक पुरुषसँग सहवास गर्ने गरेको रहस्य खोलेकी छिन् । हाई प्रोफाइल राजनीतिज्ञ आफ्ना प्रेमी भएको भन्दै उनले ग्राहकबाट महंगा उपहार पनि मिल्ने गरेको रहस्य खोलीन् । सर्वियामा ...
आमाको पेटमा नै आफ्नै टाउकोमा धमाधम मुक्का प्रहार गर्ने यि कस्ता शिशु ?
एजेन्सी । अल्ट्रासाउण्ड रिर्पोटमा देखिएका यि आमाको पेट भित्रका शिशुलाई अहिलेसम्म साढे चार लाखभन्दा बढि मानिसले हेरिसकेका छन् । कारण उनले पेटभित्र नै आफ्नो हातले आँफैलाई नै निरन्तर कुटीरहेका । जसका कारण नै यो भिडियो भाइरल बनेको हो । भिडियोमा हेर्दा यि शिशुले आमाको पेट भित्र नै आँफुलाई बेस्सरी हानेको दृश्य देख्न सकिन्छ । थप भिडियोबाट
एजेन्सी – नाइजेरियाली नागरिक मुहम्मद बेलो अबुबकरको ९३ वर्षको उमेरमा शनिबार निधन भएको छ। कुनै बेला उनी मुस्लिम धर्मगुरु मौलवी समेत रहेका थिए । उनले १३० जना महिलासँग विवाह गरेका थिए । आफूलाई विवाह गर्नका निम्ति अल्लाहले धर्तीमा पठाएको भनेर उनले बताउँदै आएका थिए। आइतबार उनको मृत्यु भएपछि हजारौं मानिस उपस्थित भएका थिए । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ । बेलोका निजी सहायक सलावुद्दिन बेलोले न्युज एजे...
अष्ट्रलियामा नाङ्गो नाच, जहाँ दर्शकले पनि जुत्ता समेत लगाउन पाउँदैनन् (भिडियो सहित)
माघ १८ गते- अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा अहिले अहिले एक किसिमको नाचले निकै चर्चा बटुलेको छ । जहाँ नाच्ने कलाकारहरुदेखि हेर्ने दर्शकसमेत पूर्णरुपमा नाङ्गै हुन्छन् । नृत्य हेर्न आउने दर्शकहरुलाई समेत टिकटमै लुगा वा जुत्ता लगाएर आउनेहरुलाई प्रवेश निषेध भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । अष्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित न्यू साउथ वेल्सको आर्ट ग्यालरीमा ‘न्युड लाइभ’ नाममा चलिरहेको यो नाचले दर्शकको संख्या निकै बटुलेपनि...
यस्ता बेहुला जसले बेहुली बोक्ने भन्दै वर्षौदेखि ६३० केजीको बंगुर पाल्दै आए
एजेन्सी । रोचक र विचित्रको घटनाका लागी चीन विश्व्मा नै शिर्ष स्थानमा पर्ने गर्छ । जहाँ कहिल्यै नदेखिएका र नचिताएका खबरहरु सुन्छिन्, देखिन्छन् र भाइरल पनि बन्न पुग्छन् । यसैबिच चीनको बीजिंग गाउँमा बिवाह पश्चात दुलहीलाई सुँगुरमा चढाएर बिदा गरिएको खबर यतिबेला सामाजिक संजालमा भाइरल बनीरहेको छ । दुलही बोक्ने सुँगुर झन्डै ६३० केजीको रहेको बताईएको छ । उक्त सुँगुर दुलहाले आफ्नो दुलही बोक्न चाहिने भन...
एजेन्सी । एउटी महिलाले कतिवटा पुरुषसँग सेक्स गर्न सक्छिन् ? इटालीकी २७ वर्षे पाओला साउलिनो नामक मोडलले १ करोड ९४ लाखसँग शारिरिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने बाचा गरेपनि अहिलेसम्म ४ सय जनासँग सम्बन्ध राखिसकेको र थाकेको भन्दै अब १० लाख मानिससँग भने सेक्स गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् । इटालीको जनमत संग्रहविरुद्ध भोट गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन उनले ‘पोम्पा टुर’ नामक यात्रा नै तय गरिन् । उनले यसको पहिलो लेग...
यी युवतीको १ करोड ९४ लाखसँग यौनसम्पर्क गर्ने वाचा, तर ४ सयसँग नै थाकिसकिन्
ताजा खबर :- इटालीमा एक २७ बर्षीय मोडेलले अचम्मको वाचा गरेकी छिन् । पाओला साउलिनो नामक ती मोडेलले आफ्नो देशका १ करोड ९४ लाखसँग यौन सम्पर्क गर्ने वाचा गरेकी छिन् । तर उनले ४ सयसँग यौन सम्पर्क स्थापित गर्दैगर्दा आफू निकै थाकिसकेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । ती मोडलले भोट हाल्ने १ करोड ९४ लाखसँग यौनसम्पर्क गर्ने बताएपनि कम्तीमा १० लाख मानिससँग भने वाचा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् । पाओलाले इटाली...
एजेन्सी । हामीकहाँ मन्दिरलाई पवित्रता र आस्थाको केन्द्रविन्दु मानिन्छ । जहाँ फोहोर, अनावश्यक सामाग्रीहरु लैजान प्रतिबन्ध गरिन्छ । तर जापानमा यस्तो मन्दिर छ जहा महिलाका भित्री बस्त्र सजाएर राखिन्छ । जापानको राजधानी टोक्योमा यो मन्दिर अवस्थित छ । जुन मन्दिर बौद्ध मन्दीर हो । आम मानिसहरु यो मन्दीरको विषयमा भिभिन्न कुरा गर्ने गर्छन् । कोही यो मन्दीर डरलाग्दो भएको बताउँछन् त कोही यो मन्दीरमा जादु पन...